Muungaab oo ka qeybgalay munaasabad xalay lagu qabtay degmada Hodan – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka maamulka degmada Hodan ee sanadkii tegay ayaa xalay lagu qabtay xarunta maamulka degmadaasi ee magaalada Muqdisho.
Mubaasabadda ayaa waxaa ka qeybgalay mudanayaal ka tirsan Baarlamanka, mas’uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka iyo qeybaha bulshada ee degmada Hodan.
Gudoomiyaha degmada Hodan C/qaadir Cali Kulane oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in sanadkii tegay uu maamulkiisu muujiyay wax qabad la taaban karo, isagoo intaa ku daray in sanadkan uu rajeynayo in maamulkiisa ay u qabsoomaan howlo farabadan oo muhiim u ah bulshada degmada.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab ayaa ku boorriyay bulshada ku dhaqan degmada Hodan iney gacan ka geystaan ammaanka una soo jeestaan horumarinta degmadooda.
Dhageyso warka subax ee Radio Muqdisho. 08/01/2015